Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Sehatra nomerika vaovao ho an'ny fifaninanana Miss Universe
ImpactWay, sehatra media sosialy, dia nanambara ny fiaraha-miasa amin'ny Miss Universe Organisation ho fanohanana ny Fifaninanana MISS UNIVERSE faha-70, alefa mivantana manerana izao tontolo izao ny 12 Desambra 2021, amin'ny 7 ora hariva EST avy any Eilat, Israel.
ImpactWayv dia safidy hafa amin'ny sehatra tambajotra sosialy lehibe. Izy io dia miasa ho karazana tontolo iainana nomerika vaovao tanteraka, mifantoka amin'ny tombontsoa ara-tsosialy sy ahafahan'ny mpampiasa - olona, ​​orinasa, ary fikambanana tsy mitady tombony - hampisy, handray anjara ary hizara fiantraikany ara-tsosialy amin'ny sehatra manerantany.
Ny fampiharana ImpactWayv dia natao hanohanana ny fiaraha-mientana ara-tsosialy maneran-tany sy ny fandraisana anjara ho an'ny vondrom-piarahamonina maneran-tanin'ireo mpifaninana Miss Universe avy amin'ny firenena efa ho 80, sy ireo mpankafy, mpanaraka ary mpijery manerana an'izao tontolo izao, mahatratra eo amin'ny antsasa-tapitrisa mpijery.
Ao anatin'ny Fifaninanana MISS UNIVERSE faha-70, ny ImpactWayv dia mampiantrano fanamby ho an'ireo solontena rehetra mba hamoronana "Impacts" betsaka indrindra amin'ny fampiharana ImpactWayv eo amin'ireo mpankafy sy mpanaraka azy. Impacts dia mari-pandrefesana fiaraha-miasa ara-tsosialy vaovao an'ny ImpactWayv, mandrefy ny fahatsiarovan-tena sy ny hetsika aingam-panahy avy amin'ny hetsika eo amin'ny lampihazo.
Ny ImpactWayv Challenge dia misokatra ho an'ny mpifaninana tsirairay ary mitohy hatramin'ny 11 Desambra 2021. Ny mpandresy amin'ny fanamby, araka izay voafaritra amin'ny habetsahan'ny Impacts lehibe indrindra sy ny famoronana ankapobeny, dia hambara mandritra ny fandefasana mivantana ary hahazo fanomezana avy amin'ny ImpactWayv ho an'ny fiantrana ny safidin'ny mpifaninana.